Maxaa Madaxweyne Lafta Gareen laga sugaa inuu taro Koofur Galbeed? – Kalfadhi
Madaxweynaha cusub ee Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen), waxaa u baryey waa’ ay tahay inuu wajaho fulinta barjaamijkiisa siyaasadeed ee uu ka hor sheegay Golaha Wakiilada KGS.
Waxaa hor yaala caqabado ay ugu waa weyn yihiin ammaan darrida, khilaafaadka qabaa’illada, arrimaha bini’aadanimo ee ka jira KGS, cadaalad xumida iyo kuwo kale, oo dhaammaantood sugaya inuu Madaxweyne Lafta Gareen wax ka qabto muddadiisa xilka.
Barafasoor Maxamed Cali Kalaay, oo ah Guddoomiyaha Golaha Aqoonyahannada KGS, ayaa u sheegay Kalfadhi in waxa ugu horreeya ee mudan inuu Lafta Gareen u qaado tilaabo ay tahay dejinta xiisaddii ka dhalatay doorashadauu ku soo baxay.
“Cabdicasiis waxaa horyaala inuu isu keeno dadkii walaalaha ahaa ee isugu xumaaday doorasahda, islamarkaana wadahadalsiiyo wixii khasaareah ee dhacayna ka shaqeeyo sidii looga kabsan lahaa” ayuu yiri Barafasoor Kalaay.
Hase ahaatee, waxaan Kalaay sidaas wax ula arkeen Xildhibaan Maxamed Caafaay Cali oo ka tirsan Golaha Wakiillada KGS, oo wareysi uu siiyey Kalfadhi ku sheegay ineysan jirin caqabad u gooni ah Lafta Gareen ee uu wajahayo uun hawl ka hor imaan lahayd Madaxweyne kasta oo ku guuleystay xilka uu ku soo baxay.
“Caqabadaha Soomaaliya ka jira meel kasta ayey saameeyeen ee ma jirto wax gaar u ah Madaxweynaha cusub iyo Maamulka Koonfur Galbeed” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Caafaay Cali.
Laakiin, Caafaay ma diidana iney Madaxweyne Lafta Gareen hor yaalaan caqabado fara badan. Waxa uu yiri “nin haddii la doorto wixii sugaayo waa dareemi kartaa. Koleey, hawl culus ayaa u taalo. Alle ha u fududeeyo culeys waa jiraa” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Caafaay Cali.
Barafasoor Maxamed Cali Kalaay waxa uu u arkaa in xallinta dagaaladii uga dhacay Baydhabo xarigga musharraxii ugu weynaa ee la tartami lahaa Lafta Gareen, Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) darteed, ay qasab kadhigeyso inuu tilaabada koowaad u qaado meyridda tabashada arrintaas kadhalatay.
“Inuu Reer Koonfur Galbeed ka shaqeeyo sidii wadahadal iyo dib u heshiisiin loo dhax dhigi lahaa ayaa koow looga baahanyahay” ayuu yiri Barafasoor Maxamed Cali Kalaay.
Inta badan madaxda la doorto ee Soomaaliya, marka ay u soo bandhigaan Wakiilada barnaamijyadooda siyaasadeed kadib, waxaa lagu eedeeyaa ineysan waxba ka qaban sababihii lagu doortay. Balse, Barafasoor Kalaay waxa uu u sheegay Kalfadhi inaan dhibaatooyinka ka jira KGS qaarkood laga dadan karin indhaha.
“Waxa ugu daran waa ammaanka iyo inuu wax ka qabto ciidamadadareeska dowladda ku labisan ee dadka ku dhibaateeya wadada u dhaxeysa Muqdishoiyo Baydhabo. Sidoo kale, waa inuu xoogga saaraa furitaanka jidadka xiran iyo qatarta Al-shabaab” ayuu yiri Barafasoor Kalaay.
Caqabadaha siyaasadeed ee uu wajihi karo Madaxweyne Lafta Gareen waxaa ka mid ah qancinta siyaasiyiinta deegaankiisa ee aaminsanaa in doorashada uu ku soo baxay ay ahayd in dib loo dhigo, si uu tartanka uga qeyb-galo Abuu Mansuur oo u xiran dowladda.
Xildhibaannaddii Waday Mooshinkii Ka Dhanka Ahaa Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Laabtay